Waa tan Sababta Dadku u Neceb Yihiin Mawduucaaga | Martech Zone
Shabakadda ayaa la inkiri karin inay tahay ilo muhiim ah oo macluumaad u ah dhagaystayaasha oo dhan waxaana muhiim ah in la hubiyo inay waxtar iyo saameynba leedahay si dadka iyo ganacsatadu ugu dadaalaan. Kacaanka dijitaalka ah ayaa dalbaya. Websaydhyadu waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo gaar ah, oo khuseeya oo cusub oo nuxur ahaan isla markiiba u baahan inay ku mashquuliyaan akhristaha. Mawduucu wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid fiiqan, wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid soo jiidasho leh oo u baahan in la caddeeyo.
Maaha in la sii wado; waa ku hogaaminta wadada. Taasi waa sababta aad ugu baahan tahay inaad noqoto hal talaabo oo hore marka ay timaado qorista nuxur wax ku ool ah iyo sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo taas marka loo eego dhagaystayaasha. Awoodda ayaa ugu dambeyn gacantooda ku jirta. Ma jiro hal istiraatiijiyad nuxur u ah oo u wada shaqeysa dhammaan, waxay u baahan tahay in si gaar ah loogu sameeyo dhagaystayaal kasta oo gaar ah. Dadku waxay leeyihiin baahiyo kaladuwan waana sababta ay muhiim u tahay in waxbadan laga ogaado baahiyahaas sida ugu macquulsan.
Taasi waa ugu dambeyntii sababta aan u sameynay sahankan - Waxaan dooneynay inaan ogaano waxa dadku ku raaxeystaan, aysan ku raaxeysan, waxa ay jecel yihiin iyo waxa ay neceb yihiin markay tahay World Wide Web. Sahaminta waxaa lagu sameeyay 712 qof oo da'doodu tahay 18-65 + waana halkaan aan ku ogaan karno waxa ka dhigaya waxyaabaha wanaagsan kuwo wanaagsan iyo kuwa xun. Waa xog sidan oo kale ah oo ka caawineysa Stratton Craig inuu abuuro nuqul, laga bilaabo e-commerce illaa qoraallada blog sidoo kale sidoo kale wuu kaa caawin karaa adiga. Stratton Craig
Qaar ka mid ah tirakoobka xiisaha leh ayaa la helay, oo ay weheliyaan qaar la yaab leh sidoo kale. Ma ogeyd:
Waxyaabaha warbaahinta bulshada ayaa ka muhiimsan jiilka hore?
Your blog shirkadeed ma gaari doono 18-24 jir.
Kaliya 2 ka mid ah 712 qof ku raaxayso dukaamaysiga internetka!
Stratton Craig waa shirkad isgaarsiin qoran oo xafiisyo ku leh London iyo Bristol. Waxay weydiiyeen su'aalo dhowr ah oo xulashooyin ah oo kusaabsan waxa wanaagsan iyo waxa xun ee ay u egyihiin waxayna soo saareen xog-ururin si loo muujiyo natiijooyinka:
Tags: BlogsHufnaanContent Suuqblogging shirkadahadesignimagesmarketingFiidiyowyada Suuqgeyntawaxyaabaha ku jira warbaahinta bulshadacraig strattenTeknolojiyada / Internetkatextcontent content
Saadaalinta Suuqgeynta Waxqabadka ah ee Qorsheynta sanadka 2015
KISSmetrics waxay soosaaraysaa Warbixin Jid aad u Muujinaysa